गणित २१०० द्वारा प्रजाति को छैठौं मास लोप हुने भविष्यवाणी गर्दछ नेटवर्क मौसम विज्ञान
गणितले २१०० द्वारा प्रजातिहरूको छैठौं लोप हुने भविष्यवाणी गर्दछ
वर्षौंको अवधिमा हाम्रो ग्रहको इतिहासमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। केही नरम र मध्यम रहेको छ, र अरूहरू धेरै रूख र आक्रामक छन्। ती मध्ये केहि धेरै प्रजातिहरु को विलुप्त हुन को लागी गरीएको छ। तर किन यस्तो अवसरहरू भएका छन् जब धेरै प्रजातिहरू ठूलो मात्रामा लोप भइसकेका छन्? म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको एमआईटीको वायुमंडल र ग्रह विज्ञान विभागका भूभौतिकीका प्राध्यापक डानियल रोथम्यानले यस प्रश्नको जवाफ दिन गणितको प्रयोग गरेका छन्।
भविष्यवाणी अनुसार, वर्ष २१०० मा महासागरहरूले 2100१० गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड जम्मा गर्नेछन्। एक गिगाटन १,००,००,००,००,००० किलोग्राम (एक ट्रिलियन) को समान छ। यदि यसलाई रोक्न केही गरिएन भने ठूलो मात्रामा लोप हुने सम्भावना ट्रिगर गर्न पर्याप्त छ। यो निष्कर्ष हो कि रोथम्यानले विगत 1.000.000.000.000 542२ मिलियन वर्षको कार्बन गडबडीलाई ध्यानमा राखेका छन्।
1 भविष्यवाणी गर्न गणित प्रयोग गर्दै
1.1 हाम्रो समयमा एक प्रतिबिम्ब
2 २१०० मा आइपुगे
भविष्यवाणी गर्न गणित प्रयोग गर्दै
En पछिल्लो 542 XNUMX२ मिलियन बर्षको विश्लेषण, अवलोकन गर्न सकिन्छ Great महान् जन लोप देखापर्यो। एउटा कुरा जुन ती सबैमा मिल्दोजुल्दो छ ठूलो कार्बन गडबडी। तिनीहरूले महासागर र वातावरण दुबै लाई प्रभावित गरे। यसका साथै संकेत गरिए अनुसार यी गडबडी लाखौं वर्षसम्म चल्दै आएको छ र यसले थुप्रै प्रजातिहरूको लोप भएको छ। समुद्री प्रजातिहरूको मामलामा, तिनीहरूमध्ये 75 XNUMX% सम्म।
एमआइटी जियोफिजिक्स प्रोफेसरले विज्ञान एडभान्सेस जर्नलमा प्रस्तुत गरे, जुन गणितिय फार्मूलाको साथ उनले प्रकोपको थ्रेसहोल्डहरू पहिचान गर्न सकेका छन्। यदि ती सीमा नाघेको छ भने, सामूहिक लोप हुने सम्भावना धेरै महान छ।
हाम्रो समयमा एक प्रतिबिम्ब
यी निष्कर्षमा पुग्न, पछिल्लो 31 542२ मिलियन वर्षदेखि XNUMX१ आइसोटोपिक घटनाहरूको अध्ययन गरिएको थियो। कार्बन चक्र गडबडी र यसको परिमाणको महत्वपूर्ण दर टाइमस्केलको आकारसँग जोडिएको थियो जुन समुद्रको क्षारीयता र जलवायु परिवर्तनले समायोजन गर्दछ। यो यी दुईको अम्लीकरण रोक्नको लागि सीमा हो।
जब यी दुई थ्रेसहोल्डहरू मध्ये एउटा सीमा नाघ्छ, यो अवलोकन गरियो कि प्रजातिहरूको ठूलो लोप हुन्छ।। कार्बन चक्र परिवर्तनको लागि जुन लामो समय अवधिमा देखा पर्दछ, लोप हुन्छ यदि यी परिवर्तनहरू मिडियाको आफ्नै अनुकूलता भन्दा छिटो दरमा देखा पर्दछ। हाम्रो समयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा झल्काउने कुराले। जहाँ कार्बन डाइअक्साइड मानहरू आसमान छ, र जलवायु अत्यधिक द्रुत दरमा परिवर्तन हुँदैछ, टाइमस्केल्समा बोल्दै।
यसको विपरित, छोटो टाइमस्केल्समा हुने झटाहरूको लागि, कार्बन चक्र परिवर्तनको दरले फरक पार्दैन। यस बिन्दुमा, के प्रासंगिक छ परिवर्तनको आकार वा परिमाण हो, जसले सम्भाव्यता निर्धारित गर्दछ।
२१०० मा आइपुगे
रोथम्यानले भने कि यस घटनाको पूर्ण विकास हुन करीव १०,००० बर्ष लाग्छ। तर यो धेरै सम्भव छ कि परिस्थिति आएपछि यो ग्रह अज्ञात क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। त्यो वास्तवमै समस्या हो। "म भन्न चाहन्न कि घटना अर्को दिन देखापर्दछ," उनले एक विज्ञप्तिमा भने। म भन्दै छु कि यदि यसलाई नियन्त्रण गरिएको छैन भने, कार्बन चक्र दायरामा सर्नेछ जुन अब स्थिर हुँदैन र यो यो भविष्यवाणी गर्न गाह्रो हुने तरिकाले व्यवहार गर्ने थियो। भूगर्भीय विगतमा, यस प्रकारको व्यवहार जन लोपसँग सम्बन्धित छ। '
अन्वेषक पहिले लेट पर्मियन लोपमा काम गर्दै थिए। पृथ्वीको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर युगमा 95%% भन्दा बढी प्रजातिहरू थिए र कार्बनको विशाल नब्ज भारी मात्रामा संलग्न भएको देखे। त्यसबेलादेखि साथीहरू र वरपरका व्यक्तिहरूसँग धेरै कुराकानीले उसलाई यो अनुसन्धान गर्न उत्साहित गर्यो। यहाँबाट उहाँ आफैंले भन्नुभए अनुसार "म एक गर्मीको दिन बसे र कसैले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले कसरी अध्ययन गर्न सक्छु भनेर विचार गर्ने प्रयास गरें।" के लाखौं वर्ष पहिले भएको थियो, ठूलो समय तराजू कब्जा, आज केहि शताब्दहरु मात्र देखिन्छ जस्तो देखिन्छ।
हाम्रो ग्रहको सन्तुलन छ। यो तापमान, मौसम, प्रदूषण, कार्बन स्तर, आदि। सन्तुलन, जुन पहिले भन्दा द्रुत परिवर्तन हुँदैछ प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ। के म रोक्न सक्षम हुनेछु? र यदि होईन भने, हामी कसरी उसलाई बतायौं कि हामीले उसलाई अझै रोकेका छैनौं र उसलाई आइरहेको देख्यौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » गणितले २१०० द्वारा प्रजातिहरूको छैठौं लोप हुने भविष्यवाणी गर्दछ
ला Niña घटना
मौसम परिवर्तनले तूफानको तीव्रता बढाउनेछ